फेसबूक र ट्विटरमा मात्रै देखिने मन्त्रीहरूको प्रगति
देशका लागि आफूलाई नै भुलेर योगदान गर्नेहरूले तक्मा पाइसके । तक्मा पाएको उपलब्धि तिनले हर्षोल्लाहसका साथ सामाजिक सञ्जालमा स–गौरव प्रस्तुत गरिसके । हामी भने यो भएन, त्यो पनि भएन भनेर असन्तोषका स्तम्भहरू लेखेर बस्नु परेको छ । यो एकबारको जुनी समेत हास्यास्पद् जस्तो लाग्छ ।
आकाशे पुलमाथि बसेर सवारी साधन गुडिरहेको हेर्दै दिन कटाउने सयौं युवाको निम्छरो अनुहार हेर्छु । कहाँबाट के–के सपना देखेर झोलामा कस्ता–कस्ता कागजपत्र राखेर गाउँ छाडेका होलान्, यी नौ जवानहरूले ! घोत्लिएर सोचिरहन्छु । यस्तो लाग्छ, यत्तिको गहिरो सोचाइमा त सेक्सपियर पनि परेनन् होला ।
सोचाइको मथिङ्गलमा फसेका बेला सुनौलो भविष्यको सपनाका भारी बोकेर एक थान पत्रिका हातमा आउँछ । पुरानो साइकलमा लगाम कसेर एउटा सानो बच्चाले बेचिरहेको छ पत्रिका । तर दुःख मान्नुहुँदैन । बालबालिकाको अधिकार पनि पत्रिकामै लेखिएको छ पक्का । भोलिका कर्णधार भनेर त किताबमै लेखिएको छ ।
समाचारमा पढेँ– अघिल्लो दिन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भाषण गरेका एकजना मन्त्रीज्यू त एउटा एनजीओको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पो पुगेका रहेछन् । यी एनजीओहरू जसले हाम्रा भोकानाङ्गा फोटा देखाएर आफ्नो स–परिवार युरोप हस्तान्तरण गरायो ।
हात्तीको चपाउने र देखाउने दाँत हुन्छ भन्छन् । हाम्रा मन्त्रीहरू पनि हात्ती भएका छन् । समाचार अर्को पनि छ– जनतालाई सामाजिक सुरक्षका अनेकौं प्रलोभन देखाएर एक मन्त्री किसानमारा/जनतामारा सहकारीको साधारण सभामा सहभागी हुन पुगेका रहेछन्, किनभने त्यो सहकारी उनकै रहेछ । रामराम कस्तो तिगडम !
यो चाहिँ समाचारको कुरा होइन, नाकको चालले थाहा पाएको । जनता र मुलुकको स्वाभिमानको प्रश्न उठाएर नथाक्ने मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सचिवहरू आईएनजीओले बन्दोबस्त गरेको साताव्यापी विदेश भ्रमणमा निस्किन्छन् । मेयर र मुख्यमन्त्रीहरू विदेश गएकोगयै छन् । हेर त चमेली, लाजै पचाएर सरकारी खर्चमा काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य श्रीमतीका साथ अमेरिका भ्रमणमा गएका छन् बाबै ।
केही मिडियामा समाचार आउँछ– हाम्रा मन्त्रीले आज यस्तो निर्णय गरे, उस्तो निर्णय गरे, यो घोषणा गरे, त्यो घोषणा गरे, अबको यति दिनभित्रमा यस्तो हुने भयो, उस्तो हुने भयो आदि । नेपाली जनताका दुःखका दिन गए, फलनो आयोजनाको डीपीआर बन्यो, यो हुने भयो, त्यो हुने भयो, इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो भयो जस्ता तथाकथित प्रगति विवरण पेश गरेको खुबै पढ्न पाइन्छ । मन्त्रीका गफअनुसार त समाजवाद नै आइसक्यो । तर फेसबूकभन्दा बाहिर जनताको जीवन भने झनझन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
हामी नेपली नागरिक, खासगरी युवाहरू यस्तो मानसिकतामा पुगेका छौं कि सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा सहजै पत्याइदिन्छौ । सरकारले समाजिक सञ्जालमा गरेको अपडेट वा मिडियामा आएका कुरा नै अन्तिम सत्य हुन्, भनेर प्रचार गर्छौं । पार्टी कार्यकर्तालाई त झन् समाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रगति देख्ने आदत परिसकेको छ । ‘भोलिदेखि कलंकीमा पानी जहाज चल्ने’ भनेर ब्लग जस्तो देखिने अनलाइनमा समाचार आयो भने पनि ‘हो, हो चल्ने नै भयो’ भन्नेहरू धेरै छन् ।
यसो हेर्दा मोनोरेल सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ । धेरै त चढिसकेका पनि होलान् । मोनोरेलका सब–स्टेसनहरू कहाँ–कहाँ हुने भनेर समेत खुलाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पाइपबाट ग्यास पनि आइसक्यो । तर त्यो गोबरको ग्यास थियो, जुन हाम्रा बाउबाजेले वर्षौंदेखि प्रयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गोबर ग्यास उद्घाटन गरे । जनताले ठाने– यो त जमनिमुनिको ग्यास होला ।
‘भोलिदेखि कलंकीमा पानी जहाज चल्ने’ भनेर ब्लग जस्तो देखिने अनलाइनमा समाचार आयो भने पनि ‘हो, हो चल्ने नै भयो’ भन्नेहरू धेरै छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ठेगाना र सम्पादक नखुल्ने अनलाइनहरू समाचारमा किन हावि हुन्छन् त भन्दा ती झूटका पुलिन्दा हुन्छन् । झूटका पुलिन्दालाई प्रचार गर्न मन्त्रीले धेरथोर सहयोग गरेका हुन्छन्, वा भनौं शक्तिकेन्द्रले । पप्पुजस्ता देशद्रोही ठेकेदारको पैसा धेरथोर ती प्रचारसेनाको खल्तीमा पुगेको हुन्छ । त्यसको बन्दोबस्त लोकल्याणकाणी राज्यका हिमायतीहरू नै गर्छन् ।
पिसाबको न्यानो जस्तो लाग्ने यस्ता किसिमका प्रगति विवरणहरू निकै चासोका साथ मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्छन् र हाइसञ्चोको लामो हाइ काड्दै निदाउँछन् । ती ठान्दा हुन्, आज मैले धेरै विकास गरेको छु । उन्नति–प्रगति गरेको छु, किनभने समाचार शेयर गरेको छु । जनताले यो कुरा पत्याउँछन्, जुन मैले शेयर गरेको छु ।
मन्त्रीका हनुमानहरूले ती प्रगति विवरणका लिंकहरू विभिन्न अरिङ्गाल पेजहरूमा शेयर गर्छन् र नाबालक केटाकेटी जस्तै रमाउँछन् ।
तपाईंलाई अवगत नै होला, हालसालैको एक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर जाइलाग्न उर्दी जारी गरेका थिए । यसको मूल आशय मिडिया जो पार्टीबाट सञ्चालित छन्, तिनलाई दोषी देखाएर ‘के हेरेर बसेका छौ तिमीहरू सरकारको चौतर्फी हमला भएको देख्दैनौ ?’ भन्न खोजिएको हो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले जे जसरी हुन्छ, विरोधीहरूको प्रतिवाद गर भनेको हो ।
मन्त्रीले शेयर गरेका झूटका पुलिन्दामुनि कमेन्ट हुन्छन्– ‘वा, वा .. मन्त्रीज्यू, यस्तो पो काम । यस्तो काम इतिहासमै पहिलोपटक भयो । मन्त्रीज्यूको यो महान कामले सरकार छ भन्ने आभाष दिलायो । सोह्रै आना ठीक हो मन्त्रीज्यू, उनीहरूले कुरा नबुझेका मात्र हुन्, तपाईं एकदम राइट हुनुहुन्छ । हो नि मन्त्रीज्यू, दिनरात भोकप्यास नभनी खटेर काम गर्नुभएको छ हाम्रो लागि, धेरै धन्यवाद ! आदि ।’
तपाईंहरूलाई म केही उदाहरण मात्र शेयर गर्न चाहन्छु, यसलाई संकेतका रूपमा मात्रै लिनुहोला । जस्तो कि हालसालै पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भनेका छन्, ‘मैले विमानस्थलमा ठूलो सुधार गरेँ ।’ सुधारचाहिँ उनले के गरे ? त्यतातिर प्रायःको ध्यान जाँदैन । शायद जाने आवश्यक देख्दैनन् । तर तिनका कामको प्रगति विवरण सामाजिक सञ्जालमा सन्तोषका साथ प्रचार गरिएको पाइन्छ । मन्त्री स्वयं पनि प्रचार गर्छन् । यो मामिलामा उनी निकै अगाडि छन् ।
हेर्नुहोस्, नेपाल वायु सेवा निगमका साना जहाजहरू जो छन्, जसले दुर्गम भेगमा उडान भर्छन्, तिनको टिकट सामान्य अवस्थामा जनताको पहुँचमा त छैन नै, त्यो हुने पनि छैन । चाडबाडको मुखमा उसले आन्तरिक उडानका सम्पूर्ण टिकटहरू महिना दिन अगाडि नै बेचिसकेको छ । जो पहुँचवाला छन्, जो नेतागिरी गर्छन्, जो चम्चागिरी गर्छन्, तिनका हातमा ती टिकटहरू परिसकेका छन् । सरकारी विमानमा पैसा तिरेर चढ्नका लागि सोर्सफोर्स लगाउन पर्ने देश शायद नेपाल मात्रै होला ।
मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको के त्यस्तो सुधार गरे ? रनवेको आकार बढाएर ठूलो बनाए कि ? प्रवेश मार्ग वरिपरि मनमोहक बगैँचा निर्माण गरे कि ? वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कंशाकार मनुष्यले ठूलै घोटला गरेका छन्, त्यसउपर दुईशब्द चुइक्क बोले कि ? नेपाली आकाशमाथि हवाई ट्राफिक जामको समस्या हल गरे कि ? विमनस्थलमा तस्करी रोकियो कि ? ट्याक्सीहरू किन यात्रु तानातान गर्छन् ?
विमानस्थलमा लगेजका लागि घटौं कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । चर्पीमा साबुन नहुने, ट्वाइलेट पेपर नहुने कुरा त सामान्य नै भयो । अलिकति नयाँ कुर्सी राखिदिएर भुइँ पुछपाछ पारेर, पंखा जोडेर विमानस्थलको सुधार हुने होइन । टेक्निकल्ली के गरियो ? त्यो प्रधान हो । यस्ता काम मन्त्रीको पनि होइन, यदि हो भने विमानस्थल प्रमुखले मन्त्रालय सम्हालेको हुनुपर्‍यो ।
रात पर्न लागेपछि टन्न वीयर र मासु खायो । आफ्ना नजिकका साथीहरू बटुल्यो । त्यसमा पत्रकारहरू पनि हुन्छन् । तर सबै हुँदैनन् है । जो मन्त्रीकै चाहनामा विदेश पनि घुम्न जान्छन् बेलाबेलामा, ती पत्रकारलाई भन्न खोजेको । यो मन्त्री रवीन्द्र अधिकारिलाई जोडेर सिधै भन्न खोजेको होइन, मिलाएर बुझ्नुहोला । अनि टन्न वीयर र मासु खायो । समाचारहरू निकै भाइरल भएको र देशमा अब विकास हुन थालेको गफ लगायो । अब कहाँ अनुगमन गर्न जाने यार ? भन्यो, सकियो ।
चाडबाडको मुखमा सवारी साधनको भाडा बढेको छ । के यो सरकार हो ? यो सरकार हो कि कमिसनखोरहरूको संस्था हो । यातयात हेर्ने विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरू कुन दुलामा छन् ? तिनीहरू त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर घार जालान्, तर सामान्य जनता जो महिना दिन अगाडिदेखि गाडी भाडा हिसाब गरेर औँला भाँच्दै बसेका हुन्छन्, मर्का तिनलाई छ । बसपार्कहरूमा ठूलो भीड लागेको छ । मानौं तिनीहरू एकथान टिकट पाउनका लागि महाभारतको लडाईंमा संलग्न हुँदैछन् । टिकटमा सहुलित त छैन नै टिकट पाउन पनि सहज छैन ।
यातयात क्षेत्रमा चामत्कारिक फड्को भनेर लेखिन्छन् । समाचार शेयर हुन्छन् । तर पुराना गाडी चलाउने निर्णय गरेर सरकारले सिन्डिकेटलाई फेरि वैधानिकता दिएको चाल कसैले पाउँदैनन् । कमिसन विना यो चाडबाडको मुखमा सवारी साधनको भाडा बढ्दैन हजुर, किनभने बन्दको नाटक गरेर हालसालै पेट्रोलको अप्राकृतिक अभाव सृजना गरेको देखिएकै हो । यसमा राज्यको नुनपानीबाट पोषिएकाहरूकै भूमिका छ, जसले आफूलाई सच्चा राष्ट्र सेवक ठान्दछन् ।
धरातालीय यथार्थ कलंकीका बाटोहरूमा जुन धूलो उडेको छ, र त्यो धूलो बादल जस्तो मडारिएको हुन्छ । हो, यही हो हाम्रो धरातलीय यथार्थ । राजधानी लगायत देशैभरी खानेपानीको यति धेरै अभाव छ, स्वयं मन्त्री क्वाटरमा ट्याङ्करका ट्याङ्कर पानी लगिन्छ । अन्य भीआईपी, भीभीआईपीका बारेमा कुरै नगरौं । त्यसको बिल जनताको पसिनाको करबाट भुक्तानि हुन्छ । तर मिडियामा प्रचार यस्तो हुन्छ कि बाहुबलीको करामत झैं चुट्कीको भरमा यहाँ सबै तमाम भइरहेको छ ।
‘मेलम्चीको पानी आयो, आयो, आयो । अब त एक आयो, दुई आयो, तीन आयो, किनभने फलानो मन्त्री आएपछि काममा ब्रेकथ्रु भयो,’ भन्ने कुरा पङ्तिकारले बच्चादेखि नै सुन्दै आएको हो । सुन्ने क्रम जारी छ । अब त मेलम्चीको पानी आयो नै भने पनि छक्क परेर टोलाउनुपर्ने स्थिति छ । आजभोलि पनि आयो, आयो भन्न छाडिएको छैन । समाचार हेर्दा, सामाजिक सञ्जालको प्रचार हेर्दा यस्तो लाग्छ, म भोलि बिहान मेलम्चीको पानीले नुहाउँदैछु ।
मन्त्रीहरूले माखो मार्न नसकेको, केबल कमाउधन्दामा लागेको कुरा त्यो पङ्तिकाले लेखिरहनै परेन, संसदमा सत्तापक्षकै नेताले भाषण गररेको सुन्नुहोस् । पछिल्लो समय कम्युनिस्त पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले के भने त्यो विश्लेषण गर्नुहोस् । केही हप्ता अगाडि स्वयं ओली सरकारका प्राइभेट थिंक ट्याङ्करहरूले मन्त्रीहरूको बायोडाटा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो बायोडाटामा विभिन्न जोनहरू थिए, खतरनाक जोन, सेतो जोन, पहेलो जोन के–के पो थिए ।
आफूले दुःख गरेर फत्ते गरेको जनसेवाको कामको क्रेडिट लिन खोज्नु स्वभाविक हो । तर सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूमा विकास गरेर देशको विकास भएको प्रचार गर्नु हावाको झोक्का मात्रै हो ।
तरकारीको मूल्य हेर्नुहोस् बजारमा । आज कालीमाटीको कति ठूलो चर्चा छ । मानौं कालीमाटी नै नेपालको तरकारी पसल हो, अरु होइन । मन्त्री एक गाडी प्रहरी बोकेर कालीमाटी जान्छन्, अनि कडा आदेश दिन्छन् र घोषणा गर्छन्, कृषिमा आमूल परिवर्तन भयो । तर मन्त्री र तिनका पिछलग्गुहरूलाई थाहा हुँदैन कि केही स्टलहरूको इजाजत खारेज गरिँदैमा, शिलबन्दी गरिँदैमा किसानको टमाटरको भाउ बढ्दैन । चिनीको मूल्य किन बढेको हो, कोही जवाफदेही छैनन् । किसानहरूको अदुवाले बजार पाउन सकेको छैन । आज पनि किसानले सस्तो मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू बेच्नुपरेको छ । तर मन्त्रीहरू, तिनका आसेपासेहरू समाचार शेयर गर्छन्, सामाजिक सञ्जालमा केही भिडियोहरू शेयर गर्छन् र दाबी गर्छन् सबै समास्या समधान भयो ।
यस्तो कर्ममा मन्त्री लालबाबु पण्डित निकै चनाखो थिए । उनी के मन्त्री हुन् त्यो थाहा छैन तर मन्त्री पक्कै हुन् । एउटा स्टन्टबाजी मन्त्री, काम नगर्ने चर्चाका लागि जे पनि गर्ने मन्त्री । सस्तो लोकप्रियताका लागि खाली खुट्टा मन्त्रालय जान सक्ने मन्त्री । केही हप्ताअगाडि यिनले पत्रकारहरूको हुर्मत काडेका थिए, अपशब्दका अपमानहरू थोपरेर । पत्रकारलाई जाड र मासुसँग जोडेका थिए ।
आफूले दुःख गरेर फत्ते गरेको जनसेवाको कामको क्रेडिट लिन खोज्नु स्वभाविक हो । तर सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूमा विकास गरेर देशको विकास भएको प्रचार गर्नु हावाको झोक्का मात्रै हो । हामीले वास्तविकतामा के चिज प्राप्त गरेका छौं त त्यो जगजाहेर छ । तपाईंहरू समाजिक सञ्जालका प्रचारहरू र कथित मिडियाका प्रचारहरूभन्दा आँखा बाहिर लैजानुहोस्, असली नेपालको मुहार त्यहीँ देखिन्छ । मानौं कि यस्ता प्रकारका मिथ्या प्रगति विरवण पढ्नकै लागि एकबारको जुनीमा जीवित छौं हामी, देख्न र अनुभूति गर्नका लागि होइन ।
केन्द्रीय मन्त्रीका कुरा छाडौं, प्रदेश सरकार र तिनका मन्त्रीका बकम्फुसे प्रगति विवरणहरू धेरै पढ्न, सुन्न पाइन्छन् । तर यथार्थमा त्यो हुँदै हुन्न, जुन तिनीहरूले समाजिक सञ्जालमा बडो हर्षका साथ शेयर गरेका हुन्छन् ।
असोज १४, २०७५ मा प्रकाशित